Intwasahlobo kulo nyaka izofudumala kunokujwayelekile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Intwasahlobo izofudumala kunokujwayelekile
Intwasahlobo yowezi-2017 isiqalile futhi sinesibikezelo samazinga okushisa nesimo sezulu esizobe sikhona nokuthi yini esilindele. Yize ukuqala kwalo kubanda impela, Intwasahlobo ilinganiselwa ukuthi ifudumele kunokujwayelekile.
Ngokwemininingwane evela kwiState Meteorological Agency (Aemet), kunesiphepho enhlonhlo esizodala ukuthi amazinga okushisa ahle futhi kuvele nemvula neqhwa ezifundazweni eziningi. Kodwa-ke, amazinga okushisa namanzi esele ahlaziyelwe ukubikezela kwentwasahlobo uma kuqhathaniswa nobusika obudlule kanti kulindeleke intwasahlobo efudumele.
1 I-squall phezu kwenhlonhlo
2 Kufudumele kunobusika obujwayelekile
3 Imvula ebusika
I-squall phezu kwenhlonhlo
Ngokuya ngemininingwane ye-Aemet, ngesiphepho esisenhlonhlweni izinga leqhwa lizoba ngamamitha angama-300/400 enyakatho-ntshonalanga. NgoLwesine kuzoba usuku olubi kakhulu njengoba umphambili uzobe usebenza kakhulu. Le ngaphambili ibangela ukwehla kwamazinga okushisa aphezulu futhi kuzobukeka sengathi ubusika sebuyile.
Ngaphezu kwalokho, kulokhu kwehla okuphawulekayo kwamazinga okushisa kufanele sengeze ukungena kwemimoya yezingxenye zasentshonalanga ezoshaya ngezikhathi eziqinile kuzo zonke izintaba zaseCantabrian nasezifundeni ezisogwini lwaseGalician naseCantabrian.
Kusukela ngoMgqibelo, amazinga okushisa azobuyela kancane kancane yize ezokwenza ngokungalingani kuyo yonke inhlonhlo.
Kufudumele kunobusika obujwayelekile
Siyajwayela ukuzwa ukuthi ubusika buyafudumala futhi buyafudumala. Futhi lokhu kugcizelelwa kakhulu yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Sibhekise ebusika buka-2016-2017. Bekuvame ukufudumala ngokushisa okujwayelekile kwama-degree ayi-8,5. Lesi silinganiso singama-degree angu-0,6 ngaphezu kwesilinganiso esijwayelekile salesi sizini, okwenza kube ubusika be-1965 obufudumele kakhulu kusukela ngo-XNUMX kanye nelesine kuze kube manje kuleli khulu leminyaka.
UDisemba wayenomlingiswa ofudumele obeka amazinga okushisa okuphakathi kuka-0,6 degrees ngaphezu kokujwayelekile. UJanuwari kuvele ukuthi kubanda, kwafinyelela amazinga okushisa aphakathi nendawo angu-0,5 degrees ngaphansi kokujwayelekile. Okokugcina, uFebhuwari ube ngenye yezindawo ezishisa kakhulu, wafinyelela amazinga okushisa aphakathi nendawo angaphezu kwamazinga ayi-1,6 ejwayelekile.
Phakathi kweziqephu ezivelele zasebusika sithola ukuphazanyiswa komoya obandayo kakhulu wemvelaphi yezwekazi ngoJanuwari 18, okwaqhubeka kwaze kwaba yi-26, okuthinta inhlonhlo kanye ne-Balearic Islands.
Ngokuqondene namazinga okushisa aphansi kakhulu atholakala ebusika, sithola izilinganiso zeziteshi ezihambelana nePort of Navacerrada (Madrid), ezinama-degree angu-13 ngaphansi kuka-zero ngoJanuwari 18; kuya eMolina de Aragón, ama-degree ayi-13,4 ngaphansi kuka-zero ngalolo suku; naseSalamanca Airport, ngo-10,9 degrees ngaphansi kuka-zero ngoJanuwari 19.
Ngakolunye uhlangothi, sihlaziya amazinga okushisa aphakeme kakhulu atholakala ebusika, sithola okufudumele kakhulu eCanary Islands, kokubili ekuqaleni kukaDisemba naphakathi noFebhuwari, kugqamisa ama-degree angama-28,6 alinganiswa eTenerife South ngoFebhuwari 17; Ama-28,3 degrees esikhumulweni sezindiza iFuerteventura Airport ngoDisemba 2; kanye nama-27,6 degrees esikhumulweni sezindiza iGran Canaria ngoDisemba 3.
Siphinde saba nobusika obomile ngokwanele ngokwezimvula njengoba isilinganiso singamalitha ayi-160 ngemitha eyisikwele, okungama-20% ngaphansi kwenani elijwayelekile. Phakathi nezinyanga zikaZibandlela nangoJanuwari lina nje kancane kunangenyanga yokugcina kaFebhuwari.
Ngenkathi uDisemba enemvula ezungeze U-42% ungaphansi kokujwayelekile futhi ngoJanuwari ngama-36% nawo angaphansi, uFebhuwari ubuswakeme impela, uthole imvula nge-36% ngaphezulu kwesilinganiso.
Mayelana nonyaka we-hydrological, oqale ngo-Okthoba 1, kucatshangelwa ukuthi, kusukela ngoMashi 14, amanani emvula anqwabelene angaphansi kwama-5% amanani ajwayelekile. Ukuguquka kwesimo sezulu kunciphisa imvula nokwanda kwamazinga okushisa emhlabeni kanti iSpain isengozini enkulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Intwasahlobo izofudumala kunokujwayelekile
Yini ihora lomhlaba?
Usuku Lomhlaba Lwesimo Sezulu 2017